Usoro iji merie na roulette
Tozọ iji merie na roulette dị, ọbụlagodi na ndị na-arụ ọrụ n'ezie nwere ike ịbụ abụọ ma ọ bụ atọ ma n'ezie taa siri ike itinye na cha cha.
Edeela m ihe ọzọ banyere imeri usoro roulette isiokwu nke m na-agwa gị ka ị gụọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịghọta isiokwu a nke ọma.
Dị ka ị ga-agụ na post ►roulette na-emeri usoro nke na-arụ ọrụ n'ezie, n'etiti usoro ole na ole na-eme nke ọma na roulette nke dị nnọọ irè n'oge gara aga bụ nke gụnyere igwu egwu na ele mmadụ anya n'ihu roulette.
Ọ bụ mgbe e chepụtara na ọ dịghị roulette wheel bụ n'ụzọ zuru okè n'ibu na ya mere na oge na ha niile nwere ike ịbụ na-enwe ntụpọ na ụfọdụ ndi ma ọ bụ ụfọdụ igbe.
Akụkọ banyere roulette jupụtara n'akụkọ ifo banyere ndị egwuregwu chọtara mmejọ ndị a ma jiri ha mee ihe n'ụzọ gara nke ọma iji nweta nnukwu mmeri.
Offọdụ n'ime ihe ndị a ma ama bụ ihe dị ka narị afọ nke iri na itoolu na-arụ ọrụ Bekee Joseph Jagger, nke meriri na Monte Carlo nke ruru $ 250.000 nke oge ahụ.
Studentsmụ akwụkwọ kọleji abụọ, Al Hibbs e Roy Walford, na ngwụcha 40s ha meriri $ 25.000 na Casino Reno na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ama ama nke mba.
N'agbata 1986 na 1989, otu onye ama ama ama ama ama akpọrọ akpọrọ Billy Walters merie $ 4 nde na Atlantic City!
Ihe ndị a abụrụla nsonaazụ dị egwu ma bụrụkwa ihe kwesịrị ekwesị maka aha ama ha mepụtara, na nke ọ bụla n'ime ihe ndị a chọrọ ọrụ nkwadebe dị ukwuu.
Otu dị iche iche nke ndị na-emechi emechi nọrọ ọtụtụ izu na-edekọ nsonaazụ nke ọtụtụ wheel roulette ịchọta ntụpọ anụ ahụ; kwMgbe achọtara ntụpọ, onye ọkpụkpọ ahụ nọdụrụ ala na tebụl wee zọọ nzọ na nọmba ndị na-adịghị mma 24 awa na 24, ruo mgbe ebumnuche mmeri ruru, ma ọ bụ ruo mgbe njikwa cha cha kwụsị egwuregwu ahụ.
Ebe ọ bụ na njedebe nke ndị ọrụ ịgba chaa chaa nke 80 amalitela inwe nnukwu mmasị na ntụpọ nke roulette, tupu mgbe ahụ ọtụtụ n'ime wiil ndị ahụ nwere nnukwu ndị na-ekewapụ igbe, ofu dị ka onye mmiri ihe ndị a sokwa mee ka ha nwee nkwarụ.
N’agbata afọ 1989 na 1991, ọtụtụ casinos gbanwere wiilị roulette ochie, jiri ndị ọhụrụ dochie ha obere profaịlụ mono: nsonaazụ bụ na taa ọ bụ fọrọ nke nta ka-agaghị ekwe omume chọta ma ọ bụ jiri roulette arụ ọrụ na-ezighị ezi.
Na ngwụcha? Egwuregwu a na-enweghị mmasị na roulettes n'ọtụtụ casinos taa anaghị ekwe omume, agbanyeghị eziokwu ahụ ka bụ na ejiji (nke na-anaghị egbochi roulettes na ntanetị) na-aga n'ihu na-emebi roulette na oge, ọ bụ ya mere m ji ghọta otu sọftụwia naanị inyocha online roulette h 24, ezubere maka gbochie nkwarụ ozugbo ọ malitere igosipụta onwe ya.
Abịara m ajụjụ ikpeazụ: ma taa enwere online roulette na-adighi nma? Ọbụna ma ọ bụrụ na roulettes ndị nwere otu ihe n'oge a agaghị ekwe ka ị nweta nnukwu mmeri nke oge gara aga, ha nwere ike ịnwe obere ntụpọ, nke pere mpe, mana zuru oke iji nweta ezigbo uru. N'ezie ị gaghị atụ anya ịme ezigbo raids dị ka ndị ahụ, dịka ọmụmaatụ, Spanish Spanish Gonzalo García Pelayo dugara Europe na ezinụlọ ya na mmalite 90s.
Egwu Spaniard dị egwu
Onye na-edekọ ihe na onye na-anụ ọkụ na mgbakọ na mwepụ, Gonzalo García Pelayo bụ onye a ma ama maka nnukwu mmeri ọ kpatara na-egwu egwuregwu na casinos na ụwa niile, mgbe ọ chọpụtachara. usoro iwu iji merie, dabere na nyocha ọnụ ọgụgụ nke eserese, iji chọpụta ọnụọgụ ọ bụla kachasị amasị, n'ihi ezughị okè nke roulette.
Usoro a sitere na eziokwu na tebụl roulette enweghị ihe kpatara ya na nke a ha na-emepụta ihe na-ewu ewu nke na - eme ka ụfọdụ ọnụọgụ nwee ugboro ole na - emepụta ihe elu karịa usoro iwu.
Mgbe o chịkọtara nsonaazụ nke ọtụtụ puku ntụgharị ma tinye data ha n'ime ngwanrọ mepụtara maka ebumnuche a, Pelayo chọpụtara na cha cha cha cha cha na Madrid nwere mmasị na ọnụọgụ ụfọdụ, bụ nke ọ bara uru ịkụ nzọ.
N'ịhazi onwe ya na ụfọdụ ndị ezinụlọ ya, ọ malitere igwu egwu na Casino Gran Madrid site na njedebe nke 1991, na-achịkwa iji merie n'oge okpomọkụ nke 1992 ihe dị ka pesetas 70 nde naanị na cha cha ahụ!
Usoro ya dị mfe: ọ na-egwuri naanị na ọnụ ọgụgụ ndị a hụrụ ọkacha mmasị, na-enweghị nsogbu ịgbanwee atụmatụ ya.
Nchịkwa nke cha cha Madrid, na-enyo enyo na ụzọ nke mmeri, malitere ịgbaso usoro ya nke ọma ruo mgbe, mgbe mmeri nke ihe dị ka pesetas 500.000 n'otu ụbọchị, ha machibidoro Pelayo na ndị ezinụlọ ya ịbanye ọzọ. .
Ndị otu ezinụlọ Pelayo bidoziri njem igwu egwu na casinos dị iche iche gburugburu ụwa: Las Vegas, Australia, Austria, Denmark, Holland.
Na ngụkọta, a na-eme atụmatụ na ezinụlọ García Pelayo enwetala ihe karịrị 250 pesetas (1,5 nde euro taa), agbanyeghị na egosighi ọnụ ọgụgụ zuru ezu.
Ikpe ya ghọkwara ikpe ikpe afọ 10 na Spain.
Na 2004 thelọikpe Kasị Elu nke Spain laghachiri n’ezinụlọ Pelayo ikike ịbanye na cha cha ọ bụla na Spain site na ebe a machibidoro ya iwu na mbụ.
Mkpali nke ikpe a bụ na "enweghị ike ịkọwa ya dị ka ịghọ aghụghọ ule, ma ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ anaghị etinye aka n'ụzọ ọ bụla iji metụta nsonaazụ egwuregwu ahụ".
Akụkọ banyere Gonzalo García Pelayo na ezinụlọ ya bụkwa isiokwu akwụkwọ ► Akụkọ magburu onwe ya nke Los Pelayos na Breaking Vegas akwụkwọ ► Mwakpo roulette.
Director Eduard Cortés duziri ihe nkiri na 2012 ► Ndi Pelayo, na-adabere na ihe ndị mere n'ezie na ezinụlọ Spanish.
Etu ị ga-esi hu roulette na-adighi nma
You hibeghị ụra? Ọfọn, n'ihi na ugbu a, m ga-agwa gị banyere mgbagha nke bot na-adabere Roulette Bias Sniper.
Ọrụ ndị Pelayo rụrụ na 90s bụ ihe ịtụnanya, n'ikpeazụ mmadụ nwere ike iji ikike mgbakọ na mwepụ ha na kọmputa were nweta nnukwu uru na roulette ma enwere m ike ịmasị Pelayo maka ihe o mere ma wuo, mana kachasị ekele ya maka inwe jiri aka ya kesara akụkụ niile nke usoro ya n'ịntanetị.
Ọ bụrụ n ’ime nchọnchọ na net ị gaghị enwe nnukwu nsogbu ịchọta otu ọdịnaya ahụ m sụgharịrị n’asụsụ Bekee ma m kọọ n’okpuru iji bido iwebata isiokwu ahụ nke ọma.
Usoro Pelayo nke mbu
Iji chọta ntụpọ nwere ike ime (ele mmadụ anya n'ihu) nke cha cha, ebe ọ bụ na anyị enweghị ya iji wee tụọ akụkụ ahụ dị mkpa, anyị ga-agakwurunyocha ọnụ ọgụgụ nke omume ya.
Ọ dị mkpa ịchọpụta ma ọ bụrụ na roulette nwere omume nke "gbagọrọ agbagọ" site na ihe anyị kwesịrị ịtụ anya maka igwe zuru oke yana, iji mezuo ebumnuche a, anyị ga-ebu ụzọ tụlee etu roulette zuru oke na enweghị ntụpọ na-esi eme (Random ụkwụ anọ).
Maka ebumnuche a, Pelayo kere echiche nke "nti": Ọ bụrụ na ọnụọgụ 36 ọnụọgụgụ ọnụọgụ abịa naanị otu ugboro, anyị agaghị enwe uru dị mma ma ọ bụ na - adịghị mma na ego anyị, ya bụ, anyị ga - enwe nguzozi, ọ bụrụ na ọ pụta ugboro abụọ, anyị ga - enwe ezigbo (+1), ọ bụrụ na ọ pụta ugboro atọ, anyị ga-enwe ihe abụọ dị mma (+2), wdg. ma ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ ma ọlị, mgbe ahụ anyị nwere ihe na-adịghị mma (-1).
Biko rụba ama: ngụkọta oge a ọ dabere na ịkwụ ụgwọ ọnụ ọgụgụ ahụ, ọbụghị na ọnụọgụ sortie ya, nke anyị maara na ọ ga-abụ otu ugboro 37.
Uru dị a canaa ka ọnụ ọgụgụ ga-arụzu ma ọnụọgụ ole na ole tụgharịa na wiilị roulette na-enweghị ntụpọ Ma ọ bụ, gịnị bụ njedebe nke enweghị usoro?
Pelayo ewepụtala sọftụwia iji kpọọ egwuregwu zuru oke, nke ahụ bụ, na-enweghị ntụpọ ọ bụla, ma simomiela ọtụtụ nde enweghị atụ.
Site na nyocha ọ ghọtara na ọ chọrọ ha ọ dịkarịa ala ịme anwansị 2.000 maka otu ọnụ ọgụgụ ọ bụla tụlere, na-abawanye otu ndị a na etiti oge 100 ntụgharị n'otu oge.
Dịka ọmụmaatụ, maka ngọngọ 1.000, ọ na-arụ ngụkọta nke nde 2 ma na-eme ya maka otu oghere ọ bụla. Ka anyị jiri nlezianya lee tebụl ndị a anya:
Ọ bụrụ na anyị nyochaa nke mbụ otu nke 300 spins, anyị na-achọpụta na nchikota nke "positives" (ụkpụrụ dị elu karịa ọkọlọtọ atụ anya ọnụego na cycles nke 36 spins), na a wheel na-enweghị ntụpọ, bụ na nkezi banyere +37 (nke abụọ ọcha kọlụm).
Nke a bụ echiche dị mfe ịgbaso: ọ bụla 300 atụ ogho, nọmba ọ bụla ga-sortie opekempe 300/36 = Oge 8,33 iji mee ka anyi jiri obere ego gbajie ego.
Nke a pụtara na ọnụ ọgụgụ akpọrepu ugboro 8 ga-eme ka anyị tufuo ntakịrị na ndị akpọrọ ugboro 9 ga-eme ka anyị merie ihe.
Ọ bụrụ na a na-atụgharị ọnụ ọgụgụ ugboro 14, o doro anya na ọ nwere uru dị mma nke 14 - 8,33 = 5,67 nke anyị ga-agbakọta +5.
Ka e were ya na mgbe 300 gbachara otu ọnọdụ ahụ mekwara maka nọmba 6 ndị ọzọ, yabụ anyị ga-enwe ngụkọta ngụkọta nke tebụl ha nhata: 5,67 + 5,67 + 5,67 + 5,67 + 5,67 + 5,67, 5,67+ XNUMX = 39,69.
Ebe ọ bụ na ọnweghị nọmba ọzọ abịa karịa 9 ugboro, ka anyị kwuo na na tebụl a kapịrị ọnụ, mgbe 300 na-atụgharị, anyị nwere ngụkọta ziri ezi hà + 39.
Site na tebụl anyị nwere ike ịhụ na okpokoro dịtụ karịa ego a tụrụ anya maka tebụl na-enweghị ntụpọ (ụkwụ na-enweghị isi), nke ahụ bụ + 37, ma na nke ọ bụla, uru a dị anya na "Soft itgba”Kedu n'ime atụmatụ ahụ, maka ọnụọgụ nke ntụgharị 300, bụ + 46 (kọlụm ọcha mbụ).
Gịnị bụ "Soft itgba"? Ọ bụ uru kachasị dị elu Iru erubeghị na 95% nke mmegharị 2.000 nke ọ bụla na-atụgharị.
Naanị 5% fọdụrụnụ nke ule gafere oke a, yabụ anyị nwere ike ịsị na ọ siri ike imeri Soft Soft, ebe ọ bụ na wiil ndị ahụ na-enweghị ntụpọ ọ na-eme naanị 5% nke oge (1 oge na 20).
Gịnị bụ "Ike Limgba"? Ọ bụ oke uru bara uru ruru naanị otu ugboro n'oge ịmepụtara 2.000 nke ngọngọ ọ bụla. Ọ na - egosi na ihe puru ime eme bụ sọsọ 0,05% (otu ugboro n’ime 1) na ọ bụ uru zuru oke nke anyi aghaghi acho.
Ihe atụ nke okpokoro gara aga, ya na uru ọ bara + 39, anaghị egosipụta ihe ọ bụla banyere roulette a; nọmba ụfọdụ bịara karịa ndị ọzọ, mana ọ baghị oke.
Ọ ga-abụrịrị ihe na-akpali mmasị ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ nke ọnụ ọgụgụ ziri ezi bụ + 50, dị ka imeri Soft Soft (+ 46), ọ gaara eme ka anyị chee na okpokoro ahụ na-aga n'ụzọ ziri ezi.
Ezigbo ihe ijuanya gaara abụ dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na uru ahụ bụ + 64, nke gaara egosiputa ọnụnọ nke tebụl nke nwere ezigbo esemokwu, nke ga-enye anyị ohere ijide n'aka uru.
Mgbe ọ na-anwale oghere 300, Pelayo echeghị na ị ga-ezute ụkpụrụ ndị a ozugbo, dịka ị chọrọ otutu atụ ogho maka ọnụ ọgụgụ a pụrụ ịdabere na ya, nyere ya na tebụl kachasị mma achọtara (anyị ga-akpọ ya "A"), Naanị na 300 spins ọ ruru uru bara uru nke naanị + 39.
Ka anyị were ezumike na ihe atụ anyị ka anyị ghọta nke ọma ihe bụ "okpokoro".A","BNaC"(Nke atọ / nke anọ / ise kọlụm ọcha nke tebụl).
Kewaa Roulette asusu
Ọ bụrụ na anyị edekọwo data zuru ezu (opekempe 5.000 na-atụgharị), anakọtara site na ihe anyị ji n'aka na ọ ga-abụrịrị otu okpokoro ahụ, site na ịga na tebụl gara aga anyị ga-ahụ na nkezi uru bara uru nke roulette na-enweghị ntụpọ mgbe 5.000 spins gbasara +109; ma ọ bụrụ na uru karịa + 143 (Soft itgba) anyị na-eche ihe na-atọ ụtọ ihu ma ọ bụrụ na uru karịa +192 (Ike Limgba), anyị nọ n'ihu ezigbo ezigbo m!
Nke a bụ ihe na - eme n’ihu “A”, Nke dị ugbu a na-agbaze obi abụọ niile, ebe ọ gafere'Ike Limgba, na ụfọdụ ọnụnọ nke ntụpọ (enweghị mmasị).
N'ezie, anyị nwere ihe karịrị 99,95% ihe puru omume na ọnụọgụ ziri ezi ga-aga n'ihu na-eme ka ụzọ ha dị iche na nke otu.
Ọtụtụ tebụl roulette ndị a dọtara n’oge nyocha Pelayo bụ nke ụdị “B”, nke nwere uru dị mma nke + 153 (ọzọ na ntanetị nke 5.000 spins), ebe ọ kachasị njọ (mana ọ ka bara uru) yana “obere” ntụpọ ha ruru uru nke + 135, na-adị nso na ụkpụrụ Soft Soft (+143).
Pelayo malitere mwakpo ahụ mgbe okpokoro gafere nro, ka nwere otu 95% n'aka na tebụl ahụ na-ele mmadụ anya n'ihu.
Site na data a, Pelayo chere na ọ bara uru itinye 5% nke oge iji mehie, ebe ọ gafere oke nro, naanị 1 oge na 20 okpokoro anaghị agbada n'ebe'Ikike siri ike, karịa nke a, ọ gaghị ekwe omume maka uru dị mma ịlaghachi na njedebe dị nro: ọ dịghị wheel nke karịrị'Ike siri ike laghachi!
Ọ bụrụ na roulette, mgbe ị gafesịrị Softgba nro ahụ na-alọghachi (1 oge n'ime 20 dị ka anyị kwuru), anyị na-akwụsị ịkụ nzọ na tebụl ahụ na n'ọnọdụ ọ bụla a na-akwụghachi ụgwọ ọ bụla ụgwọ site na oge ndị ọzọ nke a na-emeghị.
Ọ bụrụ na anyị debanyere aha 10.000 site na tebụl (ndebanye aha nwere ike ime na oge nke awa ma ọ bụ ụbọchị dị iche iche, mana anyị ga-enwerịrị 100% ụfọdụ na edere aha ndị na-atụba n'otu tebụl, na-enweghị dochie ihe ọ bụla, mgbe ahụ anyị ga-emerịrị rịba ama nkọwa anụ ahụ ọ bụla - ọkọ, ezughị okè - nke na-emesi anyị obi ike banyere nke a), anyị nwere data doro anya na ihe ọ nwere ike inye anyị.
Ọbụlagodi na o nwere ntụpọ pere mpe (ụdị okpokoro "C"), iji uru nweta ya, ọ ga-abụrịrị na ọ gafere oke nro ma ọ dịkarịa ala + 195 (uru a na-ezo aka na 10.000 spins).
Ọ bụrụ na o rughi ụkpụrụ ndị a, ọ kacha mma ichefu banyere tebụl ahụ, ebe ọ nweghị uru ọ ga-enye anyị.
Mgbe okpokoro na-enweghị ntụpọ (Nkezi Random Wheel) ruru ma karịa 30.000 na-atụgharị, ogo ya na Soft Soft, ịmalite ịjụ na ọdịda ahụ ga-aga n'ihu ruo n'ókè ebe, mgbe ọtụtụ puku ụmụ akwụkwọ nyocha nyochachara, ọnweghị ọnụọgụ nwere uru ndị bara uru, inwe uru ụlọ mere ka mmetụta ọ bụla nke mgbanwe dị mma site na ụkpụrụ a tụrụ anya maka tebụl na-enweghị ntụpọ ghara ịdị irè.
Mana ọ bụrụ na okpokoro nwere ntụpọ ọ bụla, ụfọdụ ọnụọgụ ga-agabiga ụkpụrụ nkịtị wee gaa n'ihu na-eme ya.
Ọbụna ụdị tebụl "C" ga-akarị ihe'Ike itgba, mgbe ị na-ekwe nkwa uru dị mma.
Ọ bụrụ na tebụl bụ nke ụdị "A", mgbe 30.000 spins ọ ga-ruru stratospheric nti nchikota nke + 966, nke na-agaghị ekwe omume ịdebanye aha na tebụl na-enweghị ntụpọ, nke kachasị oke na enweghị usoro bụ naanị + 294.
Ọ bụrụ na ọ bụghị doro anya, uru +966 na-enweta ụgbụ uru nke 966 ịkwụ ụgwọ nke nkeji 36 ọ bụla, mee ịba ụba ma hụ ego ole ọ nhata na nkwụnye ụgwọ na-enweghị ọ bụla wagering progression chọrọ.
Atụmatụ Pelayo maka ịkụ nzọ na Roulette
Mgbe anyị chọtara roulette nke karịrị karịa'Ike ịgba, usoro ịgbaso dị mfe: ị ghaghị ịkụ nzọ nọmba ọ bụla dị mma.
Ọ bụrụ na naanị onlygba nro agafewo, anyị ga-enyerịrị naanị nọmba ndị ahụ ruru uru bara uru +8, iji zere nkwupụta ụgha ndị sitere na ohere dị ọcha.
Ọmụmụ ihe banyere omume roulette nwere ntụpọ pere mpe ma ọ bụ nke doro anya (Tebụl nke ụdị "A", "B" na "C"), emere ya na ngwaọrụ kọmputa nke weghachitere omume yiri nke ezigbo tebụl, n'ụzọ dị otú a Pelayo na nke ya ezinụlọ (ọ kpọrọ ha "ụgbọ okpuru mmiri" mgbe ha banyere n'ụlọ nzukọ iji dekọọ mbipụta ndị ahụ) nwere ike ịtụ anya ọkwa dị mma enwere ike ịnweta site na wiil wiil roulette.
Iji maa atụ, ịtụle nnwale 1.000, tebụl nke ụdị "A" kwesịrị ịpụta nha nke nọmba 30 zuru oke, maka tebụl nke ụdị "B" ụgwọ a na-akwụ ga-adaba na 20 zuru ezu, ebe tebụl ụdị "C" na nkezi na-ekwe nkwa a uru net Ẹkot na-emeri 12 zuru.
Dabere na ụkpụrụ ndị a, Pelayo rụpụtara amụma mmeri na ihe dịka pesetas 70 nde, bụ nke mere n'ezie site na ezigbo ihe mere na Casino de Madrid n'oge okpomọkụ nke 1992.
Ọfọn, mgbe tiori ka anyị gaa n'ihu na-eme: site na sọftụwia roulette a n'ịntanetị m chọrọ ịmepụta ngwá ọrụ nke, na-amalite site na otu mgbagha nke ọma nke Pelayo nakweere, ga-anabata usoro nke usoro kachasị mma na egwuregwu ịntanetị taa.
Nke mbụ, ka anyị mee ka nke ahụ doo anya ozugbo ọ bụ bot, nke ahụ bụ, ihe omume na-azọ nzọ n’onwe ya, yabụ na ị gaghị eji aka gị dekọọ ọtụtụ puku na puku ntụgharị; ọ bụrụ na Pelayo nwere nkà na ụzụ a na ntanetị n'ịntanetị afọ 20 gara aga, ọ ga-abụrịrị na ọ ga - abụrịrị otu nde mmadụ.
Cheedị echiche banyere njem njem maka ezinụlọ dum, oge awa edekọ na-atụgharị incognito, nrụgide nke ịkụ nzọ na tebụl jupụtara na ngwụsị izu, na nkenke, ọ bụ n'ezie ọrụ akwụghị ụgwọ, mana ọ bụ na ọrụ bụ ọrụ. .
Site na nke a, bot bụ ezigbo enyi, n'oge a enwere akara bọọlụ roulette kwa ụbọchị na vidiyo na YouTube, ebe ị nwere ike ịhụ ihe atụ nke mmemme dị mma, nsogbu bụ na, agbanyeghị, m na-emeghe ọtụtụ mgbe vidiyo ebe m na-ahụ bots ndị na-agba nzọ na software roulettes, nke na nkọwa ya abụghị ezigbo roulettes, mana na-agbaso mgbagha nke igwe oghere.
Ọ bụrụ na ịnweghị sistemụ mmeri, bot na-arụ ọrụ iji mebie ọghọm, ọ bụrụ na ị nwere usoro mmeri, bot bụ ngwa ọrụ kachasị mma, n'ihi na ọ nweghị ụgwọ njikwa, ike adịghị agwụ ya, ọ anaghị atụ ụjọ, ọ nweghị ụlọ ịsa ahụ, ọ ga-abụ ihe na-adịghị mma ma na-enweghị obi ebere ọbụlagodi mgbe anyị na-ehi ụra blissfully.
Kedu ka ị chere Roulette Bias Sniper (Bet ụbụrụ)
Bettingzọ ịkụ nzọ dị dabere na usoro mbụ nke Pelayo, nke m nwere olileanya na enweghị obi abụọ na oge a na ọ bụ a n'ezie 100% emeri Usoro; gịnịzi gbanwere ya?
N'ezie, oge ọ bụla m na-eche: mana ọ bụrụ na akọwaala usoro mmeri a n'ụzọ zuru ezu n'ịntanetị ruo ọtụtụ afọ, gịnị kpatara na ọ nweghị onye wuru bot tupu? Gịnị kpatara m ji na-ahụ naanị bọọlụ bọọlụ na-egwu okpukpu abụọ na sọftụwia sọftụwia ma ọ bụ nke na-anwa ịkọ amụma omume ya na ụfọdụ algorithm na-eche echiche? O nwere ike ịbụ na onye ọ bụla mere ya na-edebe ya (n'ụzọ ziri ezi) naanị maka onwe ha? Ma ọ bụ na mgbakọ na mwepụ doro anya na niile online roulette enweghị ike ịkpa ókè?
M na-agwa gị echiche m banyere isiokwu a: enweghị mmasị na ntanetị dị adị, naanị na site na usoro imepụta nke taa (otu ihe), ọ na-ewe ogologo oge tupu nkwarụ (agbanyeghị obere) nwere ike igosipụta onwe ya, ọzọ ọbụlagodi na roulette abụghị nkwarụ, ọbụlagodi ntakịrị uche okpokoro zuru ezu iji mepụta anomaly na ọnụọgụ nke ọnụọgụ.
Nke abuo, online casinos na-enyocha nsonaazụ nke roulettes ha na ha na-ahụkwa ma ọ bụrụ na ihe adịghị mma, mana n'oge a, ha nwere ohere 2: ma ha ga-agbanwe mpaghara ntụpọ ozugbo na nnukwu ego (n'ihi na ọ bụrụ na ha bụ otu ihe, ' separator mgbanaka na ọ bụghị naanị otu igbe), ma ọ bụ na-eme nnọọ ihe ọ bụla, ọ dịkarịa ala ruo mgbe ha ghọtara na mmadụ na-emeri karịa ọ ga-eri ha ịgbanwe ntụpọ akụrụngwa. Kedu ihe ị ga - eme kama counter?
N'etiti ohere abụọ ahụ enwere oge akọwapụtara nke ọma, nke bụ oge na-agafe site na mgbe ihe ọjọọ roulette na-emetụta mgbe onye na-ere ahịa hụrụ ya.
N'oge a ọ dabara Roulette Bias Sniper, dị ka ọ bụ na mgbanwe ole na ole mana mgbanwe m mere na echiche mbụ nke Pelayo, ọ na-agba mbọ ịchọpụta ntụpọ (obere ma ọ bụ nke doro anya) wee malite ozugbo na-anwa ị nweta uru n'aka ha maka onye ọkpụkpọ ahụ, ọbụlagodi na ọ na-arụ ọrụ, na-ehi ụra ma ọ bụ na-eme ihe niile bụ ihe ọzọ. karịa ile anya na enyo na bọl na-agba agba.
Nhọrọ ntanetị ntanetị na Roulette Bias Sniper
Achọrọ m ka obi sie gị ozugbo banyere otu ihe: iji roulette bot a dị mfe.
Amụma! site na mbipute 8 Roulette Bias Sniper na-eji ihe ngosi ihe ngosi ọhụụ ọhụrụ Screen Capture Engine budata n'efu na nke a ► njikọ. Yabụ ị ga-eji sọftụwia abụọ n'otu oge.
Dị ka anyị kwurula ebe ahụya isi atụmatụ bụ nke Pelayo kọwara na post a ka m ga egosiputa naanị isi atụmatụ nke mmemme, maka nhazi na nkọwa zuru ezu banyere nhọrọ egwuregwu m họọrọ mee vidiyo akọwapụta ma bipụta ha na ► Youtube ọwa di ThatsLuckM na-adụ gị ọdụ ka ịdebanye aha ma rụọ ọrụ ọkwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara maka mbipụta ndị ga-agbaso.
Main Nhọrọ nke Roulette Bias Sniper
Registration Ndebanye aha nke ọnụ ọgụgụ na-apụ apụ.
Saving Nchekwa akpaaka nke spins na faịlụ ederede (bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na PC mebie, ike ọdịda mberede, wdg).
Ikekwe gbanyụọ na-akpaghị aka pc n'elu iru otu Kwụsị mmeri ma ọ bụ otu Kwụsị Loss.
Ility Ikike itinye bot ahụ na ihu ka i wee nwee ike idobe windo cha cha na ihuenyo zuru oke (nọo n’elu).
Ility Ikike itinye windo cha cha ahụ na mbido ka ọ ghara ikpuchi ya popups ma ọ bụ mgbasa ozi cha cha ndị ọzọ.
Oss I nwere ike ime kpọọ ụda enwere ike ịhazi ya na mmeri ọ bụla.
► Ikike ilele bot na mode Obere, nke ahụ bụ, windo nke bot na-ebelata n'ịdị elu maka mkpa ọ bụla maka nhazi na obere ngebichi.
Ility Inwe ikike ikpebi ugboro ole egosiri na ọ ga-edekọ nọmba ole dị mma na nzo ọ bụla ga-ebido (dịka ọmụmaatụ tebụl Pelayo na-amalite site na 300 pịgharịa gaa n'ihu).
Ike ikpebi mmadụ ole nkeji site na onu ogugu nzọ.
Ility Ike iji bot naanị ịdekọ spins n'etinyeghi aka (bara uru maka ndi na-eji usoro ndi ozo ma choro ike ulo akwukwo maka ebumnuche ndi ozo), maka nke a, o zuru iji tinye '0' na mpaghara nke nkeji iji mee maka otu onu ogugu.
► Ohere iji dozie uru bara uru nke nọmba ga-nzọ: usoro izizi na-ebu ụzọ leba nọmba ahụ anya yana uru bara uru +8 mgbe ị gafere Soft Soft na ọnụ ọgụgụ niile dị mma ma ọ bụrụ na ị gafere Ọnọdụ Ike.
► Nhọrọ Ọta Bet: iji kpuchido ihe mmeri gị mgbe emechara Soft Soft (karịa na 5% nke ikpe uru nwere ike ịda), ịnwere ike ịtọ ọkwa na, ọ bụrụ na PV + nke okpokoro amalite ibelata (na-adịkarị karịa Soft Soft), bot ahụ, ọ kwụsịrị ịkụ nzọ. Iji mee nke a, bot na-edekọ PV kachasị elu nke tebụl (PVMax) ka ọ na-etolite ma jiri ya tụnyere Soft Limit na uru PV +. Na vidiyo YouTube m ga-akọwa nhọrọ a dị mkpa n'ụzọ zuru ezu.
► Ikike ilele nkesa nke nzo na roulette na a eserese ndenye ọpụpụ, na ngosipụta nke puru omume mgbakọ na mwepụ (Bias prob%) nke ezigbo ọnụnọ nke a bias gbakọọ na-adabere na ọnụ ọgụgụ nke hits merie na ikwu na ego nke nọmba nzọ kwa atụ ogho.
Ndị ọzọ Nhọrọ nke Roulette Bias Sniper
► Bets mgbochi-Banye: bot na-agbanye naanị otu ntọala na-acha uhie uhie na otu na oji (yabụ ị ga-efunahụ ma ọ bụrụ na a na-atụgharị efu) ọ bụla na-atụgharị anya mgbe enweghị ezigbo nzọ iji mee. Nke a na - egbochi nkwụsị site na tebụl egwuregwu, ọbụlagodi na ọ na - ewepụta obere ego maka ndebanye aha (gụọ n'okpuru etu esi agụta ya). Dị ka ihe ọzọ na ịkụ nzọ kacha nta na-acha uhie uhie na oji, ị nwekwara ike ịkụ nzọ n'ụzọ random naanị na-acha uhie uhie ma ọ bụ naanị na nwa; na ogologo oge ego ahụ bụ otu (n'ezie, ọ na-azọpụta euro ole na ole n'ezie), ma ọ dịkarịa ala cha cha anaghị aghọta na a na-edekọ ọnụ ọgụgụ ahụ n'ụzọ doro anya.
Scheme Atụmatụ nchọnchọ (maka ịgba izu) n'etiti atụmatụ nke bot ahụ rụpụtara na tebụl mbụ nke Pelayo kọwapụtara. Otu n'ime ihe peculiarities nke Roulette Bias Sniper bụ na iji gbakọọ ma jiri Mmetụta nro na Uru Positive Value nke okpokoro, ọ na-eme nnwale 2.000 na-enweghị usoro na otu ogho ọ bụla, n'ụzọ dị otú a ị nwere ọnọdụ a na-achịkwa n'akụkụ ọ bụla nke egwuregwu ahụ ma ọ bụghị na ngọngọ nke 500 spins dị ka ọ na-eme na tebụl Pelayo ozugbo ntụgharị 5000 karịrị. Na tebụl mmemme (Isiokwu Nkọwa BiasEtinyewo m obere kọlụm (nwayọ nwayọ) kọlụm nke kwekọrọ na tebụl Pelayo metụtara Pịnye "C" (gụọ akụkụ mbụ nke post maka Ama).
Na onyonyo dị n’okpuru, ị ga - ahụ na anyị nọ na mkpụrụedemede 1.500 edekọ (ntụpọ ahịhịa ndụ nke na - aga n’ihu n’oge), yana uru Isiokwu bara uru nke + 73 na Soft Soft nke bot nke +92 mepụtara, dị ka nke mbụ nke Pelayo. okpokoro (Nro dị nro na kọlụm nke abụọ na tebụl) nke bụ + 92. O doro anya na o doro anya na ọ dịghị (ma) ọnọdụ maka ịkụ nzọ na wiil a.
Na-ezipụ e-mail na akụkọ zuru ezu na ọkwa VP +, tebụl, wdg. Nhọrọ a bara uru ga - enyere gị aka inweta ozi ịntanetị (ọbụna na ekwentị gị ya mere) nkeji ole na ole ma ọ bụ oge awa ọ bụla, nke mere na ọbụlagodi na ịnọghị n'ụlọ ma ọ bụ na-eme ihe ọzọ, ịnwere ike ịlele ọnọdụ nke ndebanye aha na ndekọ ego. Enwekwara ike ịrịọ ka e zigara gị ozi email tupu PC agbanyụ (Nhọrọ ShutDown) na-eru Kwụsị Win ma ọ bụ Kwụsị Loss setịpụrụ na isi egwuregwu panel.
► Calculator stkwụ ckinggwọ Nyocha: Ego ole ka ọ ga-efu anyị iji debanye aha 7.000 na Roulette Bias Sniper ka o wee banye n’ebe a na-agba chara chara chara cha cha ebe akara ịgba chaa chaa na-acha uhie uhie / ojii bụ cent 20? Ekele maka nhọrọ a, ị ga-enwe echiche nke ụgwọ nke ijikwa ndebanye aha. Naanị tinye nzọ kacha nta na mpaghara ahụ, ntụgharị ọ bụla na-enweghị ịkụ nzọ bot ga-agba na uhie / ojii (oge etiti) na ọnụ ọgụgụ ntụgharị ị chọrọ ịdebanye aha. Mgbe ahụ ịpị bọtịnụ ahụ Calc anyị ga-enweta nsonaazụ, nke a ga - abụ gburugburu 15 euro.
01.Uzo ole ka nzọ Roulette Bias Sniper na ntụgharị ọ bụla? Ọ dabere, ozugbo ejiri Softgba nro karịrị, bot ahụ na-amalite ịkụ nzọ nọmba niile na uru PV + Ihe kariri 8 ma obu ka ikpebie (iwu Pelayo bu +8). N'ime ule ndị e mere ruo ugbu a, bot ahụ abanyela na nọmba 7 maka ntụgharị ọ bụla. O doro anya ma ọ bụrụ na a gafere oke ike (njedebe na-enweghị isi) ha na-agba nọmba niile nwere PV + karịrị 0 (ya bụ, ihe ọma niile) nke nwedịrị ike ịbụ 13 ma ọ bụ 14.
►02. Kedu ihe bankroll kwesịrị ka onye ọkpụkpọ ahụ nwee? Na nke a, m na-adabere na ihe ngosi doro anya nke Pelayo n'onwe ya: nkeji 1.000 bụ nke kacha nta iji chee usoro nke ọdịiche na-adịghị mma ọbụlagodi na enwere ọnụnọ nke enweghị isi. Nke a pụtara na ọ bụrụ na tebụl pere mpe maka ọnụọgụ abụọ bụ 0,20 ị nwekwara ike ịmalite site na a isi obodo mbu nke € 200. Mgbe bankroll ruru € 400 ị na-aga ịkụ nzọ 2 nkeji nke 0,20 kwa zuru (cents 40) wee gaa n'ihu.
03.A tebụl m debara aha karịrị Soft Soft, ma mgbe narị ole na ole tụgharịa uru PV + laghachiri na nkịtị, gịnị kpatara ya? Ọ bụrụ n’ị gụọ nkebi mbụ nke post ahụ nke ọma, ị ga-achọpụta na Pelayo n’onwe ya kwuru na tebụl enweghị ntụpọ nwere ike ịfefe Soft Soft na 5% nke ikpe. Otú ọ dị, ọ bụrụ na uru ahụ daa n'okpuru Soft Soft, ọ pụtara na n'ọnọdụ ọ bụla enwere usoro nke ike siri ike nke ụfọdụ ọnụọgụ, usoro nke ejiri nlezianya tinye na bot (Bet Shield nhọrọ), ha ka nwere ike idu ezigbo uru nye ihe ọkpụkpọ.
04. Ego ole ka m ga-edekọ iji ghọta ma ọ bụrụ na enweghị isi ma ọ bụ na ọ bụghị? Opekempe 7.000, n'eziokwu ma ọ bụrụ na ị na-ele tebụl Isiokwu Nkọwa Bias ị ga - achọpụta na etinyere m akara uhie na nri 7.000. Nke a bụ n'ihi na na 7.000 na-atụgharị uru nke Soft Soft and Slight Bias (ntakịrị mkparị) dabara (+160), yabụ ọ bụrụ na enweghị obere mkpirisi "ntakịrị" uru PV + nke tebụl ga-adịgide n'okpuru ọnụ ụzọ a, ma ọ bụghị na 7.000 spins ọ ga-amaliterịrị ịrị elu karịa Soft Soft (lee ụkpụrụ maka 7.500 spins, ebe uru nke Slight Bias na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe na-amalite ịrị elu ma e jiri ya tụnyere Soft Limit).
►05. Enwere m ike iji Roulette Bias Sniper na igwe eji agba ikuku? Kpomkpam, ị ga-atụfu. Ihe dị mkpa achọrọ bụ na enwere mmadụ na-atụba bọọlụ ahụ, yabụ gbochie ndị na-agba mgba okpuru roulette ebe enwere ụdị onye ngosi iji kọwaa egwuregwu ahụ, mana bọọlụ ka na-amalite n'onwe ya ma ọ bụ site na ịpị bọtịnụ ndị ọzọ.
Enwere m ike ibuli nzọ m mgbe m na-egwu egwu ma ọ bụrụ na m na-emeri? I nwere ike, mana emela. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-emeri site na ịkụ nzọ 1 € kwa ọnụ ọgụgụ na ọbụlagodi na roulette na-ele mmadụ anya n'ihu, ọ nwere ike ịmalite ọdịiche na-adịghị mma dịka ịwepụ ego niile, mgbe ahụ ị nwere ike tinye eziokwu na VP + nke okpokoro dabara n'okpuru Soft Gba n'ihi na ị nọ na 5% nke ikpe ndị a kpọtụrụ aha n'elu (ọ ga-eme) na mmebi ya enweghị ike ịgbanwe agbanwe! Betkpụrụ nzọ dị mma ga-aharịrị ka bankroll kewara 1.000 (lee Ajụjụ n.2)
07. Enwere m ike iji bot a karịa otu pc? Eeh, ọ bụrụ na inwere PC karia otu n'ụlọ, ị nwere ike ịme ya ọfụma, n'ezie ana m akwado ka ị na-agba ya ozugbo site na igodo USB, yabụ ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịtinye ya dabere na PC ịchọrọ iji ma ọ bụ otu ị si ekpebi jikwaa ụlọ ọrụ nlekota gị n'ịntanetị.
►08.Olee otu nzọ na-ewere ọnọdụ? Ọbụna oke uka ma ọ bụ nwee ọganihu? Mgbe niile naanị nha nha. Ọ bụrụ na enwere ụfọdụ uru, ọbụlagodi ihe ngwọta kacha njọ (Pelayo na-egwuri egwu dị ka nke a), ọbụlagodi na oge na-aga ị nwere ike ịbawanye uru nke ịkụ nzọ ahụ (lee Ajụjụ n.2 na n.6).
►09.Etu esi hazi Roulette Bias Sniper? O siri ike iji ya? Iji ghọta otú bot ahụ si arụ ọrụ, o zuru ezu ịghọta ụzọ mbụ Pelayo si kọwaa na mbido post, ozugbo ị mụtara na ọ ga-adị mfe ịghọta ihe ọ bụla ọzọ. Na ►Youtube ọwa di ThatsLuck ị ga-ahụ vidiyo a kapịrị ọnụ maka ntinye engine engine ►Screen Capture Engine na otu ihe maka iji ya Roulette Bias Sniper.
► 10. Ndi bot na-arụ ọrụ na casinos niile dị n'ịntanetị? Akụkụ aghụghọ nke mmemme ahụ bụ nke ịchọpụta ọnụọgụ ndị ewepụtara na ihuenyo ahụ. Na vidiyo ntọala m ga-akọwa ihe niile, agbanyeghị bot ahụ ekele maka nke ọhụrụ ►Screen Capture Engine na-achọpụta ihe ọ na-ahụ na ihuenyo ma ọ dịghị emekọrịta n'ụzọ ọ bụla na koodu mmemme nke ibe weebụ nke ebe nrụọrụ weebụ cha cha. Na otu aka, nke a pụtara na ntọala izizi dị ntakịrị mma (naanị otu ugboro kwa cha cha), mana n'aka nke ọzọ cha cha enweghị ike igbochi nsuso ahụ, ana m eji usoro a kemgbe 2012 na-enweghị nsogbu ọ bụla.
►11.Ma ọ bụ bot a na-emeri roulette? Ọ bụrụ na roulette nwere obere ihu ọma EE 100%, ma ọ bụghị na ị ida ego nyekwara idekọ spins (lee Tracking Cost Calculator nhọrọ). Mgbe ahụ enwere ọnọdụ mgbe roulette na-edebanye aha ọjọọ n'ihi ọnụọgụ siri ike nke nọmba ụfọdụ, na nke a ị nwekwara ike nweta ezigbo mmeri, ihe dị mkpa bụ ịghọta n'oge mgbe ngbanwe nke nọmba na-alaghachi ma kwụsị ( StopWin) tupu mmeri enweta ike (akụkụ nke jikwaa Bet Shield nhọrọ).
► 12. Na vidiyo na YouTube Ahụwo m na ndị agbata obi nke nọmba nzọ ụkwụ na-apụta mgbe mgbe, ọ ga-ekwe omume ịkụ nzọ na ndị ahụ kwa? Mba, n’ihi na ọ bụrụ n’ezie enweghị nsogbu, roulette ga-ebido imepụta mmeri na ọnụọgụ a kapịrị ọnụ, ndị ọzọ ga - apụta na ntanetị ha nkịtị, na - ewetaghị anyị uru ọ bụla n’ikpeazụ.
13. Enwere usoro atụmatụ? N'ezie, ọ bụrụ n'ịchọghị iwere ohere ọ bụla, ị nwere ike ime nke a: tinye ego kwesịrị ekwesị iji debanye aha 7.000 spins. Ozugbo emere nke a, ị ga - enwerịrị otu echiche ga - amata ma ọ bụrụ na roulette adịghị mma ma ọ bụ na ọ bụghị, na ị nwere ike mechaa malite ịkụ nzọ. Iji mee nke a, tinye naanị uru "0" n'ọhịa Ntọala Bet ma jiri ndidi chere njedebe nke ndebanye aha, nke nwekwara ike ime n'ọtụtụ ụbọchị dị iche iche, ọ bụrụhaala na roulette bụ otu mgbe niile. Ọ bụrụ na, na Kama nke ahụ, ịchọrọ omume ahụ, hapụ uru "1" na mpaghara Bet Units ma lelee ọnọdụ ahụ n'ụzọ na-aga 7.000 spins, ọ ga-eme mgbe ụfọdụ ịmalite ịkụ nzọ ama mgbe narị ole na ole tụfuru ma ọ bụrụ na PV + nke okpokoro kariri Soft Soft.
. 14. Olee otu ị ga-esi nweta Roulette Bias Sniper? I nwere ike ibudata software ozugbo na njikọ n'okpuru. Ozugbo ị hụrụ vidiyo na Youtube ọwa ma mụta ihe niile bụ isi ọrụ, ị nwere ike ịzụta akwụkwọ ntuziaka na Amazon, nke ị ga-ahụ ebighị koodu.
Ọfọn, tupu ibudata Roulette Bias Sniper site na njikọ di n'okpuru, cheta na nke a bu otu nchọpụta ngwá ọrụ maka egwuregwu nke roulette na dị ka ndị dị otú a, na-erigbu ya nwere ka kacha, ọ ga-n'ụzọ zuru ezu ghọtara na ọrụ ya, ọbụna ma ọ bụrụ na mgbe ahụ dị nnọọ pịa iji rụọ ọrụ ya.
Nbudata Nbudata	RBSniper8.zip - 4 MB